Christmas အတွက် Delux Version နဲ့ Album ထွက်လာတဲ့ Sia
On November 6, 2018 November 8, 2018 By Aminnyar
သြစတေးလျ အဆိုတော်မမ Sia ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နှစ်ကုန်ခါနီးမှာတုန်းက Christmas ကာလအတွက် Album သစ်လေးတစ်ခုကို ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Album လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ Every Day Is Christmas ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ Album လေးဟာ Christmas အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး သူမ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စီစဉ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Album တစ်ချပ် ဖြစ်တယ်လို့လည်း […]
Music NewsChristmas AlbumNew ReleaseplaylistPopYouTubeLeaveacomment
Studio Album အသစ် ထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ Ella Mai
On October 9, 2018 October 9, 2018 By Aminnyar
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက အဆိုတော်မလေး Ella Mai ဟာ စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ သူမရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်ကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သိပ်မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သူမရဲ့ Album အသစ်လေးတစ်ခွေ ထွက်လာတော့မယ့် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ View this post on Instagram ELLA MAI. OCTOBER 12TH 2018. […]
Music NewsCelebrityNew ReleaseplaylistR&B / SoulYouTubeLeaveacomment
ခရစ္စမတ်တေး Album အသစ် ထွက်ရှိတော့မယ့် Gwen Stefani
On October 1, 2018 October 2, 2018 By Aminnyar
၁၉၉၅ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး Pop- Rock လိုင်းမှာ ထင်ရှားလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော်မမ Gwen Stefani ဟာ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တုန်းက သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကို သူမရဲ့ Twitter ပေါ်ကနေပြီး ပရိသတ်တွေသိအောင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူမ ခံစားသီဆိုထားတဲ့ You Make It Feel Like Christmas ဆိုတဲ့ ခရစ္စမတ်တေး Album အသစ်လေးဟာ မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပဲ […]
Music NewsCelebrityChristmas AlbumplaylistLeaveacomment
မတော်တဆ ပေါက်ကြားခဲ့ရတဲ့ Twenty One Pilots ရဲ့ သီချင်းအသစ်
On September 3, 2018 September 3, 2018 By Aminnyar
ပင်တိုင်အဆိုတော် Tyler Joseph နဲ့ ဒရမ်မာ Josh Dun တို့နှစ်ယောက် အဓိကပါ၀င်တဲ့ Twenty One Pilots အဖွဲ့ရဲ့ Album အသစ်လေးတစ်ခုဟာ လာမယ့် အောက်ဆိုဘာ ၅ ရက်နေ့ကျရင် ထွက်ရှိတော့မှာပါ။ သူတို့တွေဟာ အဲဒီအကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအလယ်မှာ သူတို့တွေရဲ့ Twitter နဲ့ Instagram စာမျက်နှာတွေကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေ အားလုံး သိသွားအောင် တရားဝင် ကြေညာထားခဲ့ကြပြီးသားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ […]
Music Newsboy bandNew ReleaseplaylistYouTubeLeaveacomment
“သားချော့တေး” Album ထွက်တော့မယ့် Lady Gaga
On August 29, 2018 By Aminnyar
သီချင်းဆိုကောင်းသလောက် နေရာတော်တော်များများမှာ ဆန်းပြားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေဝတ်လေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံတွေကို အမြဲဖမ်းစားနိုင်တဲ့ Lady Gaga ဟာ သိပ်မကြာခင်မှာ Album သစ်လေးတစ်ခု ထွက်ရှိတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါထွက်မယ့် သူမရဲ့ သီချင်းခွေက လူကြီးတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးလေးတွေအတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သားချော့တေးအမျိုးအစား အခွေလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ Gaga ရဲ့ အခုအခွေလေးကို ကလေးလေးတွေအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး သီချင်းလေးတွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေခဲ့တဲ့ The […]
Music NewsCelebrityplaylistYouTubeLeaveacomment
ပွဲဦးထွက်အဖြစ် EP- အခွေ ထွက်ရှိလာတဲ့ Liam Payne
On August 21, 2018 August 21, 2018 By Aminnyar
One Direction အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Liam Payne ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့တုန်းက သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်ကနေ ပရိသတ်တွေကို သတင်းလေးတစ်ခု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ပွဲဦးထွက် အခွေလေးတစ်ခွေ ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ First Time လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီအခွေလေးဟာ EP အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်တယ်လို့ […]
Music NewsCelebrityNew ReleaseplaylistLeaveacomment
Ariana Grande ရဲ့ Album အသစ် ထွက်ရှိလာ
On August 20, 2018 By Aminnyar
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ရရှိထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး Ariana Grande ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ (၁၇. ၀၈. ၂၀၁၈) တုန်းက Album အသစ်တစ်ခု ထွက်ရှိလာပါတယ်။ Sweetener လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီ Album အသစ်လေးဟာ Ariana ရဲ့ ၄ ခုမြောက် Studio Album လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ View this […]
Music NewsNew ReleaseplaylistYouTubeLeaveacomment